Entina hanombanana ny zava-bitan’ny praiministra vaovao Pakistaney ny ‘Khan Meter’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2018 5:24 GMT
Pikantsary avy amin'ny tranonkalan'ny Khan Meter, tranonkala vaovao natao hanaraha-maso sy hanarahana ny zava-bitan'i Praiministra Imran Khan nandritra ny 100 andro voalohany niasany.
Nanao fianianana ho praiminisitra vaovaon'i Pakistan tamin'ny 18 aogositra 2018 i Imran Khan, taorian'ny fandresen'ny antokony Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tamin'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny 25 Jolay.
Ny 19 Aogositra, nanao kabary ho an'ny firenena i Khan, nanasongadina ireo 100 andro voalohany niasany sy ny drafi[tra]ny dimy taona. Nanambara ny fepetra fitsitsiana ataon'ny governemanta mba hifehezana ny fandaniana sy hanatsarana ny toekarena ihany koa izy.
Manontany ny amin'ny fahafahan'i Khan hanatanteraka ny fampanantenany ireo adihevitra miely be any Pakistan. Ho setrin'izany, dia nampiditra ny ‘Khan Meter, fitaovana nomerika handrefesana sy hanoratana ny zava-bitan'i Khan anaty 100 andro amin'ny maha filohan'ny antoko PTI azy ilay tanora mpanombo-draharaha amin'ny teknolojia antsoina hoe Salman Saeed.
Teboka dimy amby telopolo no mandrafitra ny drafitra 100 andro. Hampiditra angon-drakitra azo antoka ny Khan Meter raha vao misy vaovao azo itokiana momba ny hetsiky ny governemanta mipoitra an-gazety na antserasera. Rehefa mahavita asa mivaingana ny fitantanana vaovao, dia haneho izany ao amin'ny sehatra “zava-bita” ny Khan Meter. Mampiasa Disqus ny tranonkala, rafitra fanehoan-kevitra manerantany, mba hampidirana fanehoan-kevitra amin'ny Facebook sy Twitter, ary ahafahan'ny mpanaramaso hamafa lahatsoratra manitsakitsaka ny ‘fitsipi-pitondrantenan'ny tranonkala”.
Raha mahomby ny tetikasa Khan Meter ary ahazoana famatsiam-bola bebe kokoa, mikasa ny hanohy hanara-maso ny governemantan'i Khan mandritra ny dimy taona feno i Saeed, anisan'izany ireo fampanantenana vaovao nampidirina tao anatin'ny fandaharan'asan'ny PTI.
Sarin'i Salman Saeed, mpandrindra ny KhanMeter, nahazoana alalana avy amin'i Saeed.Portrait of Salman Saeed, KhanMeter developer, used with permission by Saeed.
Mitovy amin'ny Obama Meter (Etazonia) sy ny Morsi Meter (Ejypta) ny hevitra.
Manara-maso tetikasa telo ny Khan Meter amin'izao fotoana izao: ‘Fanesorana ny resaka politika sy fanamafisana ny Polisy’, ‘Mpitaridalana amin'ny famoronana an'i Punjab Atsimo’, ary ‘Manomboka fanavaozana servisy sivily’.
Tafatafa miaraka amin'i Salman Saeen, mpandrindra ny Khan Meter
Mitantana orinasa an-tserasera miaraka amin'ny asany amin'ny maha-mpanolo-tsaina, mpanofana, sy mpanolo-tsaina mifantoka amin'ny fanavaozana, ny fahaiza-mifanerasera ary ny fandraharahana i Salman Saeed, mpandraharaha monina ao Dubai.
Niresaka tamin'i Saeed ny Global Voices mba hahafantatra bebe kokoa momba ny Khan Meter tetikasany.
Global Voices (GV): Ahoana no nahatongavanao tamin'ny hevitra toy izany?
Salman Saeed (SS): Avy amin'i Imran Khan tenany, izay nampiditra ny hevitra fandraisana andraikitra eo amin'ny vahoaka ny aingam-panahy. Taloha, tsy mba nanan-kevitra mihitsy momba ireo fampanantenana nataon'ireo antoko politika tamintsika isika alohan'ny naha-voafidy azy ireo. Raha mijery ny taloha ianao ary mamaky ny fanambaran'izy ireo, dia ho tohina ianao mahita ny hatsaran'ireo fanambarana ireo sy ny haratsian'ny asan'izy ireo amin'ny tsy fanarahana ny bokin'izy ireo manokana. Ireo fanambaràna ireo dia tena feno ireo tetikasa goavana hanampy ny firenentsika hiroborobo fa raha mametraka izany isika, dia tena hamokatra tokoa ho an'ny firenentsika izany. Izany no antony nieritreretako fa farafahakeliny hitondra FANANTENANA be dia be ity lehilahy vaovao ity noho ny lazany izay tokony handrisihana azy hifikitra amin'ny boky.
GV: Misy fandaharan'asa ara-politika ve sa tanjona ambadik'ity?
SS: Ny politika no tena tsy ankafizina indrindra eo amin'ny karazam-pianakaviana niaviako. Tsy misy velively ny fandaharan'asa ara-politika ao ambadik'ity hetsika ity saingy zavatra iray tsapako taorian'ny fananganana-arotana azy dia ny fahafahako hanampy ny fitantanana vaovao hampiasa ny fahaizako nomerika sy hanampy azy ireo hamolavola fitaovana mba hahazoana antoka fa voaara-maso amin'ny zava-bitan'izy ireo sy ny asan'izy ireo ny fitantanana manontolo. Amin'ny teny tsotra, dia azoko atao ny manampy ny governemanta vaovao amin'ny fanavaozana ny tolotra sivily resahan'zy ireo.
GV: Ahoana no Hahasoa azy ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny?
SS: Tia azy ny vahoaka amin'ny ankapobeny hatramin'ny nitondrako ny fandaharam-potoana manontolo ho azy ireo amin'ny fomba tia namana kokoa. Satria tsy mbola namaky ny Fandaharam-potoana 100 Andro na Fanambaran'i Pakistan Tehreek-e-Insaaf ny rehetra. Noho izany dia tena mahasoa amin'ny resaka fanabeazana azy ireo momba ny zavatra nampanantenaina sy ny fomba tsara entin'ny fitantanana vaovao hifikitra amin'izany.
GV: Ahoana no navalin'ny olona? Nirotsaka ve izy ireo?
SS: Tamin'ny voalohany dia nihevitra ny olona fa nanana fandaharan'asa ara-politika aho kanefa takatr'izy ireo miandalana ny tena tanjona rehetra eto. Nanoratra mailaka nankasitraka ny ezaka sy fanampiana azon'izy ireo atao araka izay mety ny olona avy any ampitan-dranomasina sy tao amin'ny firenena
GV: Inona no tanjonao rehefa tapitra ny 100 andro?
SS: Raha mahazo fanohanana sahaza hanohizako azy mandritra ny dimy taona ho avy aho, dia mikasa ny hanohy izany mandritra ny dimy taona feno ary avy eo dia manao toy izany koa ho an'ireo 10 taona lasa ary hampitaha ireo antoko telo amin'ny zava-bitan'izy ireo amin'ny alalan'ny fampitahàna ny fampanantenana notanterahan'izy ireo sy ny toeran'i Pakistana amin'ny tondro sasany ampiasain'ireo fikambanana manerantany mba hanadihady ny ijoroan'ny firenena.
GV: Misy olona mifandray aminao ve avy amin'ny antoko Imran Khan?
SS: Tsia, tsy mbola nisy olona nifandray tamiko.
GV: Ahoana no anangonanao ny data-angona?
SS: Manara-maso hatrany ny kaontin'ny PTI hatramin'ny nanoratan'izy ireo ny hetsika rehetra nataon'ny governemantany vaovao aho. Ankoatra izay, dia manara-maso ireo tranokalam-baovao tahaka ny Dawn sy e-Tribune aho amin'ny hetsika vaovao rehetra izay atao ary mampitaha izany amin'ireo fampanantenany sy ny fiantraikan'izany eo aminy.
GV: Hanamafy ny demokrasia ve izany?
SS: Heveriko fa efa eny sahady. Ny Khan Meter dia tovana tsara amin'ny fanavaozana ny demokrasia tena izy any Pakistana. Ity no zava-nitranga tokana izay ahitana olona mankafy ny governemanta vaovao noho ny lazany ary tsy hipetra-potsiny sy mody tsy mahita tahaka ny nataon'ny olona nandritra ny taona maro. Fotoana izao hanombohana ny fanaraha-maso ny governemantantsika, hifanakalozana hevitra rehefa diso izy ireo ary mankasitraka ny zavatra tsara nataon'izy ireo. Manampy antsika hieritreritra ho azy momba ny zava-bitan'ny governemanta vaovao izany satria afaka mahita isika fa tsy afaka manatanteraka ny 20 isanjaton'ny fampanantenany izy ireo ary azontsika omena 80 isanjato amin'ny fahombiazany izy ireo.
GV: Misy hafatra ho an'ny mpihaino ve?
SS: Tazomy amin'izay ny fandraisana andraikitry ny tenanao, diniho ny asan'izy ireo, ny tenin'izy ireo sy ny fihetsik'izy ireo satria mpiasam-panjakana izy ireo.
Manome fanantenana ny Khan Meter
Tahaka ny ObamaMeter, nampidirina ny KhanMeter mba hanarahamaso ny zava-bitan'i ImranKhanPTI, andeha hojerena hoe tahaka ny ahoana ny Khanmeter any aoriana.
Khan meter mba hanarahamaso, sy hanombanana ireo fampanantenana